Zụrụ ndị na -eso Twitch - Ndị na -ege ntị
Kedu uru m ga-enweta ma ọ bụrụ na m zụta ndị na-eso ụzọ Twitch?
Ezigbo ndị na-eso ụzọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi.
Iji mgbasa ozi mgbasa ozi mee ka vidiyo gị gaa na ndị nwere ike ịnabata gị. N'ụzọ dị otú a, ọwa gị ga-eme ka ezigbo ndị na-eso ụzọ mụbaa.
Zụta ndị na-eso ụzọ Twitch bụ nzọụkwụ mbụ iji nyere gị aka iwulite obodo dị elu gburugburu akaụntụ Twitch gị yana ọdịnaya ọdịnaya. Na-akwalite uto mkpụrụ osisi n'ụzọ kachasị dị irè.
Ọ bụ eziokwu na o yikarịrị ka onye ọrụ Twitch na-ahọrọ ịgbaso ọwa nwere obere ndị na-eso ụzọ ya na obere ewu ewu dị obere. Yabụ, mgbe ọwa gị nwere ọnụọgụ ọnụọgụ ndị ezubere iche, vidiyo gị ga-anabatakarị nke ọma n'anya obodo.
Mee ka ọwa gị na-ewu ewu.
Enwere eziokwu na ndị nwere ezigbo ndị na-eso ụzọ gị, ka ị ga-enwekwu echiche / itinye aka na mmiri iyi gị, na-adọta ndị mmadụ n'ụzọ dị mfe ịpị profaịlụ gị.
Ihe ga-esi na ya pụta ga-ekwe nkwa maka ndụ.
Dika odi ndi n’eso uzo ya di nma, anyi gha ekwe nkwa ihe enyere gi n’ime ndu ha. Kpọtụrụ anyị ka ị nweta enyemaka ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla na ọrụ ahụ n'oge ọ bụla.
Enweghị mkpa ichere maka awa 24. Anyị ga-amalite ịnapụta mgbe a kwụrụ ụgwọ ahụ.
Iwu nkwụghachi ego.
Ahịa afọ ojuju bụ mgbe niile anyị na-ebute ụzọ. Weghachite ozugbo n’ajụghị ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na anyị enweghị ike mezue iwu ahụ ka emere.
Ndị na-eso ụzọ na-eweta ọrụ maka ọkwa ọhụrụ ahụ.
Kpamkpam ee. Anyị na-enye ndị na-eso ụzọ naanị site na ịkwalite vidiyo gị nye ndị ọrụ n'ezie. Ọ bụrụ na vidiyo gị weghaara ndị na-ege ntị, ha ga-agbaso akaụntụ Twitch gị ka ha chọrọ ilele vidiyo ndị ga-eme n'ọdịnihu.
Kedu ihe bụ Twitch Followers bots?
Pụtara, bot na-eso ụzọ bot na-emepụta sọftụwia, yabụ enweghị ohere na bot ga-enwe mmasị na ọdịnaya vidiyo gị. A na-akpọkarị ha ndị na-eso ụzọ adịgboroja.
Bots bụ okporo ụzọ na-akwadoghị ma mebie iwu Twitch. N'ihi ya, ha na-emebi ọwa gị ka Twitch na-egosi ha nke ọma ma nwee ike ime ka a machibido ọwa gị iwu kpamkpam. Nke ahụ bụ ihe kpatara anyị ji ekwe nkwa NỌ B B.
Enwere ihe egwu ọ bụla na ọwa m ma ọ bụrụ na m jiri ọrụ ahụ?
Nke mbu, anyi kwesiri ijide n’aka na oru a bu ihe nchebe kpamkpam, mgbasa ozi mgbasa ozi bu iwu ma kwado iwu nke Twitch.
Echiche na ndị na-eso ụzọ dị adị ma site na atụmatụ nkwado na Social Media ma ọ bụ Nzukọ Egwuregwu Online.
Kwuo “Mba” n’inye ihe adịgboroja ma ọ bụ ọnụ ala na n'ezie, gị ọwa ga-ekwe nkwa nchebe maka ndụ.
Gịnị ma ọ bụrụ na iwu m enweghị ike mezue?